Apple dia namoaka Beta fahefatra an'ny macOS Big Sur 11.3 ho an'ny Developers | Avy amin'ny mac aho
Apple dia namoaka beta fahefatra an'ny macOS Big Sur 11.3 ho an'ny mpamorona
Apple dia vao nandefa izay efa macOS Big Sur 11.3 beta fahefatra ho an'ny mpamorona mba hitsapana fanampiny fanampiny izay mety namboarina. Fomba iray ahafahan'ny mpamorona mampifanaraka ny fampiharana sy ny fandaharan'asany amin'ireo fiasa vaovao ampiharin'i Apple ao amin'ny rafitra fiasa Mac. Ity Beta vaovao ity dia natomboka roa herinandro taorian'ny nanombohana ny kinova fahatelo.
Afaka manafatra ny kinova beta fahefatra an'ny macOS Big Sur 11.3 izao ireo mpamorona. Amin'ny alàlan'ny rafitra fanavaozana ny lozisialy ao Taratasy rafitra aorian'ny fametrahana ny profil mety. macOS Big Sur 11.3 dia manolotra safidy fanamboarana bebe kokoa ho an'ny Safari, ohatra. Manampia fomba hanamboarana ireo fizarana samihafa ao amin'ny pejy fandraisana toy ny Favorites, List of Reading, Siri Soso-kevitra, tatitra momba ny tsiambaratelo, ary fiasa vaovao vitsivitsy.
Ny fanavaozana dia misy koa fanatsarana ho an'ny fampiasana fampiharana iOS amin'ny Mac M1. Rehefa mihazakazaka fampiharana iPhone sy iPad amin'ny M1 Macs ianao dia misy tontonana preferences momba ireo safidy hafa azo kitihina. Io dia ahafahan'ny mpampiasa mametraka baiko fitendry mba hisolo ny safidy fampiasa. Ho fanampin'izay, ny rindranasa iPadOS dia manomboka amin'ny varavarankely lehibe kokoa raha mamela azy ny efijery Mac. ny fifandimbiasam-pahefana afaka alefa amin'ny rindranasa iPhone na iPad izy ireo amin'ny alàlan'ny fanindriana ny anaran'ny fampiharana ao amin'ny tsipika menio ary avy eo mifidy ny safidin'ny Preferensi Ny safidy azo kitihina dia ahafahanao manamboatra ny fikasihana, ny fikosehana ary ny fisarihana.
Betsaka kokoa ireo fiasa vaovao, na izany aza tsy mbola nisy hita vaovao amin'ity kinova ity. SAINGY mbola aloha ary tsy ho fantatray raha tena nanafina zavatra iray i Apple, mandra-pahitan'ny mpamorona ao anaty kaody raha toa ka nisy vaovao nampidirina. Amin'izao fotoana izao dia miandry ny hevitr'ireo mety hiditra an-tsehatra izahay. Raha iray amin'izy ireo ianao, tianay ny hahafantatra ny zavatra hitanao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Mac OS X » macOS Big Sur » Apple dia namoaka beta fahefatra an'ny macOS Big Sur 11.3 ho an'ny mpamorona
Beta fahefatra an'ny watchOS 7.4 sy tvOS 14.5 ho an'ny mpamorona vonona hisintona izao
Greyhound sy Wolfwalkers notendrena ho Oscars